खेलपाटी विशेष - Khelpati Khelpati - Digital Khel Patrika
‘म्यानेजर’ प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ राष्ट्रिय फुटबल टिमसँग देश विदेश घुम्न मिल्ने, आकर्षक भत्ता, अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर, राष्ट्रिय गौरवको टिमलाई व्यवस्थापन गर्ने भएकाले म्यानेजर पदका लागि एन्फामा लुछाचुडी हुने गरेको छ ।
एन्फा निर्णयको गणेश थापाद्धारा बिरोध एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले विधान विपरित नबिन पाँडेलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
एन्फा विधान मिचेर पाँडेलाई नियुक्ति निर्वाचन लगत्तै बसेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले एन्फाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा पाँडेलाई नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।
खेलाडीसँगको ‘टसल’ले गुमेको सत्ता तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापती रुक्माङ्गत कट्वालसँग ‘टसल’ लिदाँ तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताबाट हात धुनुपरे जस्तै फुटबलका एक शक्तिशाली पात्र बनेको शेर्पा खेलाडीसँगको विवादले एन्फाबाट बाहिरिनु परेको छ ।
पश्चिमको फुटबल उकास्ने भोजराजको योजना लामो समय मोफसलको फुटबलमा सेवा गरेर बिताएका भोजराज समग्र पश्चिम क्षेत्रको फुटबलको विकासमा योगदान गर्न केन्द्रमा आउन लागेको बताउँछन् ।
कुमारको मुख्य एजेण्डा – विकेन्द्रिकरण चुनावको संघारमा भेटिएका कुमारका एउटा कुरा प्रस्टसँग राखे, ‘विकेन्द्रिकरणनै फुटबलको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ ।'
'फुटबललाई ट्रयाकमा राख्यौ, अब नतिजा निकाल्छौं' फुटबलमा यदी खेलाडीको नेतृत्व स्थापित हुन्छ भने ढिलो चाँडो आउने नाम उपेन्द्रमान सिंहको हो । उपेन्द्र एन्फाका उपाध्यक्ष हुन् ।
चुनावी मैदानमा मछिन्द्र र मनाङ ! घरेलु फुटबलका दुई ठुला क्लब मछिन्द्र र मनाङ चुनावी प्रतिस्पर्धामा आमने सामने हुदैछन् । मैदानमा मात्र देखिने दुई क्लबको चुनावी प्रतिस्पर्धा फुटबलको नेता बन्ने दौडसम्म आईपुगेको छ ।
यू–२० को बन्द प्रशिक्षणमा बागमती युथका ५ खेलाडी एन्फाले साफ र एएफसी छनोट खेल्नका लागि तयार पारेको प्रारम्भिक टिममा सर्लाहीको बागमती युथका ५ खेलाडी परेका हुन् ।
एन्फाको चुनाव, हिसाबले तनाव ! एन्फाको भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले दाबी गरेका छन् । शेर्पालाई चुनौती दिएका छन्, उनैको प्यानलबाट अघिल्लो पटक उपाध्यक्ष जितेका पंकजबिक्रम नेम्वाङले ।
एन्फा चुनावका ‘प्लेईङ एघार’ वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङ प्यानल सहित असार ६ गतेको भिडन्तका लागि अन्तिम तयारीमा छन् ।
चुनावमा ‘चलखेल’ भ्रष्टचारको आरोपमा फिफाबाट प्रतिबन्धमा परेका गणेश थापाको चुनावी सक्रियता देखाउने यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो ।
अन्तिम हुन सक्छ, अलमुताईरीको कुवेत यात्रा नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहित सिनियर ११ खेलाडीलाई बाहिर राख्दै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरी कतार भ्रमणमा निस्कदैछन् ।
बल्ल बोले इन्द्रमान एन्फाको चुनाव संघारमा छ । उनी खासै बोलिरहेका थिएनन् । एन्फामा दुई पक्ष प्यानल बनाउन लागिरहदाँ इन्द्रमान मौन जस्तै थिए ।
कुशल नेतृत्वको पर्खाईमा भलिबल भलिबल नेपालको माटोको खेल हो । त्यसैले त यसलाई सरकारले राष्ट्रिय खेल बनाउन धेरै सोचेन । भौगोलिक विविधताका बीच सबै क्षेत्रमा उत्तिकै खेलिने र लोकप्रिय भएकै कारण यसलाई सरकारले राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गर्यो ।
आफ्नै चक्रव्युहमा अलमुताईरी हिजोका दिनमा अलमुताईरीको ’जय नेपाल’को नारामा एकाकार हुने उनका प्रिय खेलाडीले यसपटक उनीबिरुद्द सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । नतिजा नेपाली फुटबल दुई सिरामा बाँडिन पुग्यो ।